Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge 2021 maka Creative Fashion Startups Tinye: Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge 2021 Maka Ejiji Ejiji Mmalite
Tinye: Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge 2021 maka Creative Fashion Startups
Ebe E Si Nweta: Waya Business
Imirikiti ndị nwere mmasị na ejiji ga-ekwenye na ejiji bụ usoro ebighi ebi na mgbakwunye na ịbụ otu n'ime ngalaba okike kachasị mkpa.
Site na ịdabere kpamkpam na teknụzụ, mmalite ndị lekwasịrị anya na ejiji na-emebi ohere na echiche ndị na-agbanwe agbanwe, na-agba mbọ imeju ọchịchọ ma hụ na ahụmịhe onye ọrụ kachasị maka ndị na-ere ahịa na ndị ahịa.
Iji mezuo nke a, Tommy Hilfiger amalitela mmemme zuru ụwa ọnụ nke na-achọ ịkwado ndị mbido na-agbanwegharị ụlọ ọrụ ejiji ma na-eme ka ọ gbakọọ.
Ọ bụrụ na ị bụ mmalite mmalite ma ọ bụ ịmalite na ọkwa ya, mgbe ahụ, ohere gị bụ ime mgbanwe na ụwa nke ejiji. Tinye maka mbipụta ọzọ nke Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge.
PraxiLabs pụtara onye mmeri nke ihe nrite dike azụmaahịa Africa 2021
Banyere Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge
Mmemme a, nke amalitere na 2018, nke nnukwu ejiji ejiji Tommy Hilfiger bụ emume a na-eme kwa afọ (ugbu a n'afọ nke atọ ya) haziri iji chọpụta ma kwalite ọrụ nke ndị mmalite ejiji kachasị ewu ewu ma nwee mmetụta gafee ụwa. Ọ na-achọ ịwụfu echiche kachasị mma kachasị mma.
Na-adabere na ọhụụ nkwado Tommy Hilfiger, nke bụ n'efu n'efu na nnabata niile, mmemme afọ a na-elekwasị anya n'ịkwado ndị isi ojii, ụmụ amaala na ndị nwere agba (BIPOC) ndị ọchụnta ego na-arụ ọrụ iji metụta obodo ha ma kwalite nsonye na ụlọ ọrụ ejiji.
Mmetụta ahụ nwere ike ịdị na mpaghara dị iche iche dịka: (1) Gụnyere ndị ahịa dị iche iche (2) na-eme ka ngwaahịa nweta ngwa ahịa na ndị na-azụ ahịa na (3) imeziwanye ndụ na ọnụọgụ uru n'etiti ndị ọzọ.
Site na Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, ndị ọchụnta ego pụtara ìhè na-atụghị egwu ịkwanye oke ma mee ka mgbanwe dị na obodo ha nwee ego, ọzụzụ, na ohere nkuzi.
Ụkpụrụ ruru eru
Abụọ nkebi nke uto azụmaahịa ka akpọrọ isonye na mbido-mbido na azụmaahịa na ọkwa ha.
Y’oburu na ibido, gha aghaghi iji nkewa nke ndi ahia ma n’eme ka gi na ndi mmadu nwee ego.
Companylọ ọrụ gị ga-enwerịrị ụfọdụ ụtụ.
Y’oburu na ibu n’ogo, ahia gi aghaghi inwe ezigbo ngwaahịa nke kwesiri ahia ahia.
Ọ ga-abụrịrị na ọnọdụ uto ya yana usoro akụnụba doro anya ma na-adigide.
Ọ ga-enwerịrị ego ha nwetara ma ọ dịkarịa ala otu afọ.
Ndị mmeri nke Tommy Hilfiger Fashion Challenge 2021 ga-erite uru ndị a:
Inye ego ruru € 200,000;
A gbara na mgbakwunye € 15,000 maka mmeri "Ndị Na-ege Ntị Na-amasịkarị";
Otu afọ mentorship na Tommy Hilfiger si esịtidem ọkachamara ụwa;
Tonweta Tommy Hilfiger na netwọk ika mkpakọrịta;
Ohere isonye na INSEAD Social Entrepreneurship Program (ISEP);
Otu afọ nkuzi na INSEAD.
A na-arịọ ndị nwere mmasị ka ha nyefee atụmatụ ha nke na-elekwasị anya n'ịmepụta ọnụọgụ ejiji na-esonye.
Mgbe ha nyefere ya, ndị ga-aga ime ga-agbadata ruo mmadụ isii ndị ikpeazụ a ga-akpọ ka ha mepee atụmatụ ha site na nkwado nke Tommy Hilfiger raara onwe ya nye na ndị ọkachamara n'okwu gbasara mpụga na Ọktoba 2021.
Mgbe emechara nnọkọ siri ike nke nkuzi sitere n'aka onye nkuzi nwere ahụmịhe, ndị na-eme egwuregwu ga-ekwupụta echiche ikpeazụ ha n'ihu otu ndị ọka iwu jikọtara ọnụ na ndị na-ege ntị na Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge nke ikpeazụ na mbido 2022.
Ọ bụrụ n’ị nwere mmasị ịbụ akụkụ nke Tommy Hilfiger Fashion Frontier ịma aka 2021, nyefee ngwa gị Ebe a
Ngwa imechi na Mọnde, Machị 8, 2021. Maka ajụjụ ndị ọzọ, zipu ozi na [email protected] Rịba ama usoro na ọnọdụ tupu itinye.